Izixhobo ezi-5 zokwenza iipowusta ezikwi-intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izixhobo ezi-5 zokwenza iipowusta kwi-intanethi
Lola ifani | | Idizayini yeMifanekiso, Izixhobo zoYilo
Ipowusta ngu indlela elungileyo yokubhengeza naluphi na uhlobo lomsitho, Iprojekthi okanye inyathelo. Uyilo lwayo lusisiseko, kuba abo bayibonayo baya kuyeka kuphela ukuba bayifunde ukuba baxabela ngokwaneleyo. Yintoni egqithisile, ulwazi olukwipowusta kufuneka luhlelwe kakuhle kwaye lufundeke. Ke ngoko, zonke izigqibo ozenzayo zibalulekile, ubuchwephesha, ubungakanani beetekisi, umbala, imifanekiso, zonke iinkcukacha kufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukukhetha inkqubo elungileyo yokuyila kungenza umsebenzi wakho ubelula kwaye, ngethamsanqa, namhlanje awunyanzelekanga ukuba ube yincutshe yoyilo lwegraphic ukuze uze ne Ipowusta ebukekayo nenomdla. Zininzi izixhobo zasimahla kumnatha ezikuvumela ukuba wenze umxholo ngokukhawuleza nangokulula. Kule posi senze ukhetho lwe Izixhobo ezi-5 zokwenza iipowusta kwi-intanethi Sukuphoswa yiyo!
1.1 Uyenza njani ipowusta kwiAdobe Spark
2 Umzi mveliso
2.1 Uyenza njani ipowusta ngePost Factory
3.1 Uyenza njani ipowusta eCrello
4.1 Uyila njani iiposta eCanva
5.1 Uyenza njani ipowusta kwifotojet
Adobe Spark yinkqubo eyilwe yiAdobe Systems yewebhu kunye nezixhobo eziphathwayo. Ngale nkqubo unokwenza umxholo onomdla kakhulu, iphepha lewebhu, iividiyo ezimfutshane kunye neziqwenga zonxibelelwano. Nangona unokufikelela kuphela kuzo zonke izixhobo ngokubhaliselwa okuhlawulelweyo, unezinto ezininzi ezikhoyo izixhobo zasimahla kunye nobhaliso lwasimahla. I-Adobe Spark ibonelela ngeetemplate, yiyo ke le nto Inketho elungileyo kakhulu ukuba ufuna ukwenza ipowusta etsala amehlo, yenzelwe kakuhle kwaye akukho xesha. Kwakhona, ukuba ukhetha, ungaqala kwifayile engenanto kwaye uyile ngokwakho.
Uyenza njani ipowusta kwiAdobe Spark
Kwiskrini sasekhaya, phezulu, unenjini yokukhangela. Ukuba uchwetheza ipowusta okanye iposta apho, uya kufikelela kuluhlu olubanzi lweemodeli. Uyilo ngalunye luhlelwe ngokupheleleyo, ke unokulungelelanisa nesitayile sakho kunye neemfuno zakho.
Ukulawula inkqubo inomdla kakhulu. Ngokucofa itemplate, uyilo luya kuvulwa ngokuzenzekelayo. Kwisikrini uzobona imivalo emibini esecaleni: ngasekunene, ungahlela imvelaphi, imibala kunye nokuguqula ubungakanani beposta kuba uyilo luya kulungelelanisa ngokuzenzekelayo nobukhulu obutsha; Kwelinye lasekhohlo, ungongeza isicatshulwa, iifoto, ii icon, iilogo kunye nezinye izixhobo. Xa ugqibile, unokuzikhuphelela okanye upapashe ngokuthe ngqo kwiinethiwekhi zakho yentlalo. Kuphela into ebuyela umva kukuba ukuba awubhalisanga ipowusta igcinwe nge-apwatermark encinci kwikona esezantsi ekunene.
Umzi mveliso ngumhleli okwi-intanethi kucingwe ngokukodwa ukwenza iiposta, iipowusta, iiflaya kunye neencwadana ezivela kwiitemplate, zilula kwaye zikhawuleza kakhulu. Ngaphakathi kwiwebhu uya kufumana iitemplate zemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu, Kwaye eyona nto intle kukuba zonke isimahla kwaye iyahlelwa.
Uyenza njani ipowusta ngePost Factory
Ukwenza ipowusta kulo mhleli kulula kakhulu. Xa ungena kwiwebhu, jonga umphezulu wekhusi kwigama elithi "itemplates" Ukufikelela kuyilo lonke, khetha eyona ikuqinisekisayo kwaye usebenzise amanqaku ePost Factory ukuyilungelelanisa nokuthanda kwakho. Kwicala lasekunene lesikrini unazo zonke izinto ezenza ipowusta ezilungiselelwe ngokwemeko yazo. Kwi-bar ephezulu uya kufumana izixhobo zokuhlela kunye nokugqibezela uyilo lwakho. Ungayiguqula yonke into, izicatshulwa, imibala kwaye unokongeza izinto ezintsha.
Crello sisixhobo esenziwe yoyilo simahla kwi-intanethi eya kukunceda ukuba uvelise umxholo ngokukhawuleza nangokulula. Ngaphakathi kwinkqubo uya kufumana zonke iintlobo zeetemplate, ubume beendaba zosasazo, iintloko zebhlog, izatifikethi, kunye neeposta kunye neebhanile. Yintoni egqithisile, unokufikelela kuluhlu olubanzi lwezixhobo oko kuya kukunceda ucebise indalo yakho kwaye uyinike ukubamba kwakho.
Uyenza njani ipowusta eCrello
Ukwenza ipowusta eCrello kufuneka uye kwiscreen sasekhaya kwaye kwinjini yokukhangela bhala igama "ipowusta". Ngale ndlela uya kufikelela kwiitemplate ezahlukeneyo ezinikezelwa yinkqubo. Cofa kuleyo uyithandayo kakhulu kwaye kufuneka uyihlele ukuze uyenze ikulungele. Kwibha esekunene, uya kufumana ipaneli enika ukufikelela kwizixhobo ezahlukeneyo. Unokongeza imifanekiso, izinto, izicatshulwa kunye nokufaka izixhobo zakho. Xa ugqibile unokukhuphela uyilo lwakho okanye wabelane ngalo ngqo kwinethiwekhi yakho. Ukuba ukhetha ukungasebenzi ngeetemplate, ungasoloko uqala kwifayile engenanto, ukhetha kwiscreen sasekhaya "Ubungakanani besiko" kunye nokungena kubungakanani obufanelekileyo (ndicebisa u-42 x 59.4).
I-Cava sesinye sezona zixhobo zaziwayo kwi-intanethi xa usenza zonke iintlobo zomxholo. Inkqubo ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zetemplate zoyilo olunomtsalane kwaye inokutshintsha ngokupheleleyo. Unokwenza phantse nantoni na, amakhadi oshishino, iiposta, iividiyo, iposti yenethiwekhi yoluntu, intetho ... EUkufikelela kwi-Canva kukhululekile, nangona ezinye izibonelelo zifumaneka kuphela ngokubhaliselwa kwepro. Nangona kunjalo, unokufumana iziphumo ezintle usebenzisa izixhobo simahla kuphela, zanele kwaye ukongeza, ungahlala ulayisha ezakho izixhobo ukwandisa amathuba akho. Ukuyila iiposta kweliqonga ngumbono olunge kakhulu, kuba ngaphandle kokuba uku-intanethi, umgangatho wento oyifumanayo ulungile kwaye ulungile Inokukunceda ukuba awunazo izakhono ezininzi zoyilo lwegraphic.
Uyila njani iiposta eCanva
Canva sisixhobo ekulula ukusisebenzisa, ke awuyi kuba nangxaki yokuziqhelanisa nayo. Ukwenza iipowusta e-Canva, kuya kufuneka ungene kwiinjini yokukhangela ephezulu phezulu ikhaya kwaye ungene kwifayile ye- amagama "ipowusta" okanye "ipowusta". Inkqubo iya kukubonisa zonke iintlobo zeetemplate, ezineendlela ezahlukeneyo kunye neephalethi. Yintoni egqithisile, ungahluza ngemibala, ukugcina ezona zinomdla kakhulu kuwe. Ngapha koko, ukuba uyayithanda, kodwa umbala awukuqinisekisi, khumbula oko Iphalethi inokuhlala itshintshwa.
Xa ucofa kuyo nayiphi na kuzo, ukulungele ukuqala ukuhlela! I-Canva isebenza ngokufana neCrello. Kwiphaneli esekunene unokufikelela kwi izixhobo ezahlukeneyo nakwiphaneli ethe tyaba uya kuyifumana ifayile ye- izixhobo eziphambili.
Okunye Inkqubo yoyilo ekwi-intanethi ukubonelela ngeempawu ezifanayo kwiCrello kunye neCanva Ifotojet. Kweli qonga uya kufumana inani elikhulu leetemplate kunye nezixhobo eziza kukunceda wenze iziqwenga ezintle. Ukongeza ekubeni nakho ukucacisa uyilo, kunokwenzeka ukubahlela iifoto okanye wenze iikholaji Yonke inye! Olunye uncedo kukuba uyisebenzise awudingi nokubhalisa. Ukuphela kwento endiyibonayo kukuba ukuba ufuna ukwenza ifayile enobungakanani ngokwesiko, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wepro.
Uyenza njani ipowusta kwifotojet
Ukwenza iipowusta kwiFotojet, kwifayile ye- iphepha lasekhaya Cofa kwiqhosha "Yenza uyilo." Inkqubo iya kukubonisa ezona template zisetyenziswayo. Kwicandelo lentengiso, cofa kwi "poster" kwaye ukhethe uyilo olifunayo. Oko, ewe, qiniseka ukuba ayimakiswanga ngesithsaba, kuba oko kuthetha ukuba itemplate ihlawulwe.
Ukuhlela kwiFotojet kulula, kwiphaneli elungileyo onokuyenzayongeza isicatshulwa kunye nezinye izixhobo. Ukucofa kuyo nayiphi na into kuya kubonisa zonke izixhobo eziyimfuneko ukuyiguqula. Xa ugqibile, pUnokuzikhuphelela indalo yakho okanye wabelane ngayo kwiinethiwekhi zentlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Izixhobo ezi-5 zokwenza iipowusta kwi-intanethi
Ubala njani ubungakanani bomfanekiso wedijithali
Imifanekiso yeFotohop: uzikhuphele phi